ယာဉ် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်း၌“ ကျွန်ုပ်ငွေသည်လုံခြုံပါ၏” RayHaber | raillynews
[30 / 05 / 2020] ပုဂ္ဂလိကပျိုးခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်မည်	အထွေထွေ
[30 / 05 / 2020] Trump ကအမေရိကသို့တရုတ်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်	နောက်ဆုံးမိနစ်
[30 / 05 / 2020] Sancaktepe ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Feriha Özအရေးပေါ်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[29 / 05 / 2020] Trump: ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်	coronavirus
[29 / 05 / 2020] ဝန်ကြီး Akar ကကြေငြာခဲ့သည်! ဓာတ်ငွေ့သည်မေလ ၃၁ ရက်မှစတင်သည်	အထွေထွေ
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေယာဉ် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်“ ကျွန်ုပ်ငွေသည်လုံခြုံသည်”
ယာဉ် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်“ ကျွန်ုပ်ငွေသည်လုံခြုံသည်”
15 / 05 / 2020 အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, မော်တော်ယာဉ်, တူရကီ
TURK Elektronik Para မှထုတ်လုပ်သော PARAM SECURITY ထုတ်ကုန်သည်တပတ်ရစ်မော်တော်ယာဉ်များ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်လိမ်လည်ခြင်းနှင့်ခိုးယူခြင်းကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှား။ ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
လျင်မြန်။ လုံခြုံသောငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်သော PARAM GUVENDE ထုတ်ကုန်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးကား ၁၀၀၀ ကိုအခမဲ့ရောင်းဝယ်သည်။ လျှောက်လွှာအား Applications များကို paramguvende.param.com.tr တွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
TURK Elektronik Para သည်လုံခြုံစိတ်ချရသော e-payment စနစ်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောပထမဆုံးအီလက်ထရောနစ်ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးမော်တော်ယာဉ် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုလုံခြုံစွာနှင့်မြန်ဆန်စေရန်အတွက်၎င်း၏လျှောက်လွှာအသစ်ကိုစတင်လိုက်သည်။ TURK Elektronik Para မှထုတ်လုပ်သော“ Param Safe” ထုတ်ကုန်သည်ကားဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း၌ငွေသားသယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောလိမ်လည်ခြင်းနှင့်ခိုးယူခြင်းကဲ့သို့သောအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ လုံခြုံစိတ်ချရလွယ်ကူပြီးစျေးနှုန်းချိုသာသောငွေပေးချေမှုဖြစ်စဉ်ကိုဖန်တီးပေးသော Param Güvendeနှင့်ပထမဆုံးမော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုနှင့်ရောင်းအား ၁၀၀၀ သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ပါတီများပထမ ဦး ဆုံးလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်
အသုံးအများဆုံးမော်တော်ယာဉ်များကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်ပြwithoutနာမရှိဘဲကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြီးသတ်နိုင်ရန်အတွက်၊ ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းသူများသည် paramguvende.param.com.tr တွင်၎င်းတို့၏လျှောက်လွှာများကို ဦး စွာပြုလုပ်ရမည်။ ထို့နောက်လက်ခံသူသည်ယာဉ်စျေးနှုန်းကို Param Safe application ၏ IBAN နံပါတ်သို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည်။ e-ငွေပေးချေမှုလျှောက်လွှာပြီးနောက်ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရန်အတွက်ပါတီများသည် notary public သို့သွားသောအခါအရောင်းလုပ်ငန်းစဉ်စတင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် notary ရောင်းချမှုနှင့်အတူကားဈေးနှုန်းကိုရောင်းသူ၏စာရင်းသို့ပို့သည်။
တူရကီနိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းအီလက်ထရောနစ်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော TURK Electronic Money AS နှင့်တူရကီသည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၀ န်ခံများနှင့်တူရကီအစိုးရ ၀ န်ထမ်းများနှင့်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသည့်နောက်ငွေပေးချေမှုစနစ်တွင်လုံခြုံစိတ်ချရသော e-service နှင့် ပူးပေါင်း၍ ပထမဆုံးငွေပေးချေမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ တူရကီ Elektronik မသန်စွမ်း A.Ş. အထွေထွေမန်နေဂျာ Serkan Aziz Oral က“ ကျနော်တို့တီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာအားလုံးနဲ့လုံခြုံပြီးမြန်ဆန်လွယ်ကူတဲ့ဖြေရှင်းချက်တွေပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Param Güvendeထုတ်ကုန်တွင်အသုံးပြုသူများသည်မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရပြီးတန်ဖိုးနည်းသောဝန်ဆောင်မှုအခွင့်ထူးကိုရရှိကြတယ်။ ”
Arkas Holding သည်ရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အရင်းအနှီးများတိုးမြှင့်
ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစွမ်းဆောင်ရည် Alanya အတွက်တိုးပွါး
GEFCO သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်နောက်အဆင့် G သို့ယူဆောင်သွားမည်
တူရကီက Metro အတွက်မေ့လျော့ပစ္စည်းများကိုလေလံတင်ခြင်းဖြင့်ရောင်းချရန်မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်
Kardemir, ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရောင်းတိုးပေးရန်မှ Continues
2nd hand မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူ
RayHaber 15.05.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
HES Code ဖြင့်လေယာဉ်လက်မှတ်များကိုမည်သို့ဝယ်ယူရမည်နည်း။ ကလေးခရီးသည်များအတွက် HES Code လိုအပ်ပါသလား။
ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းများသည်ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်၍ လေယာဉ်လက်မှတ်များကိုလက်ခံရရှိသည့်လေဆိပ်တွင်
ကုန်ပစ္စည်းလှည်းများ Asyaport မှတဆင့်ကမ္ဘာကြီးကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်
Kocaeli ရှိကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားအခမဲ့ရယူခွင့်ကိုဇွန်လ ၃၀ ရက်အထိတိုးချဲ့ခဲ့သည်
လက်ရှိမော်တာများနှင့်အတူမည်မျှ TTA Tank ကိုထုတ်လုပ်နိုင်သနည်း။
ဝန်ကြီးSelçukက LGS စာမေးပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့သည်
ဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားဥယျာဉ်များနှင့်သဘာဝဥယျာဉ်များဖွင့်လှစ်ခြင်း
ကင်ညာနိုင်ငံသားများသည်တူရကီထုတ်ကုန်များကို Virtual Trade Delhi နှင့်သိလိမ့်မည်
ပုဂ္ဂလိကပျိုးခင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများဇွန်လ ၁ ရက်နေ့တွင်စတင်မည်
မြေအောက်ရထားနှင့် Ankaray အချိန်ဇယား Ankara မှာ updated
ရထားစနစ်စက်ပစ္စည်းနည်းပညာဌာန 2019-2020 အခြေခံရမှတ်များနှင့်အောင်မြင်မှုအဆင့်
ÖSYM President Aygünမှ YKS စာမေးပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း။ ထုတ်ပြန်ချက်
TCDD မှကြောက်မက်ဘွယ်သောဝန်ခံ! တံတားများနှင့် culverts တွေရဲ့အခြေအနေကိုငါတို့မသိဘူး
SGK 20 လူမှုဖူလုံရေးကျွမ်းကျင်သူများကိုခေါ်ယူလိမ့်မည်
လူမှုဖူလုံရေးဌာန (SGK) သည်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအတန်းတွင် ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲနှင့်ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း၏ ၀ န်ထမ်းများတွင်ခန့်ထားရမည့်လူမှုဖူလုံရေးလက်ထောက်ကျွမ်းကျင်သူ ၂၀ ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ လော့ဂ်အင် [ပို ... ]
Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အနာကြီးစွာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပျံ့နှံ့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးများကြောင့်တူရကီသည်အဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံများစာရင်းတွင်ပါဝင်သည်။ တဖြည်းဖြည်းပုံမှန် [ပို ... ]
IETT Flights သည်စနေ၊
ပင်လယ်ထဲမှရေနံရှာဖွေရန် Fatih Sounding သင်္ဘော
Sancaktepe ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Feriha Özအရေးပေါ်ဆေးရုံဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
Marmaray Pass နှင့်အတူပထမဆုံးပြည်တွင်းပို့ကုန်ရထားမှာTekirdağသို့ရောက်ရှိလာသည်
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ayhan: 'Ankara Sivas YHT လိုင်းသည်သမ္မတ၏သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးမီးရထားလမ်းစီမံကိန်း'
သိထားသည့်အတိုင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ်နို ၀ င်ဘာလ ၉ ရက်နေ့တွင်ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (SSB) နှင့် BMC Automotive တို့အကြား ALTAY ပင်မတိုက်ပွဲအမြောက်အများထုတ်လုပ်မှုစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သဘောတူညီချက်အောက်မှာ [ပို ... ]
တရုတ်နိုင်ငံ၏ 5th Generation Fighter J-20 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
ရရှိနိုင်သည့်အင်ဂျင်ဖြင့် ALTAY Tank ထုတ်လုပ်မှုကိုစတင်မည်
ကားရေ ၀ ယ်လိုအားသည်ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ခဲ့သည်
Coronavirus ကူးစက်မှုသည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်စတင်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။ အဆက်အသွယ်ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်ကြောင့်ပိတ်ထားသောဒေသများရှိပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းများ [ပို ... ]
အမေရိကန်ဈေးကွက်သို့ BTSO ၏ UR-GE စီမံကိန်းဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
Ankara Metropolitan မြူနီစီပယ် EGO အထွေထွေညွှန်ကြားမှုသည်ဇွန်လ ၁ ရက်မှအောက်တိုဘာ ၁ အတွင်းအကြားအကောင်အထည်ဖော်မည့် "နွေရာသီရာသီအသွားအလာအစီအမံ" ၏အတိုင်းအတာအတွင်းလူမှုအကွာအဝေးကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်မည်ဖြစ်သည်။ မျက်နှာဖုံးအသုံးပြုမှု [ပို ... ]
Ankara Sivas YHT စီမံကိန်းအကြောင်းအရာအားလုံး
IETT Driver မှ Institution သို့သစ္စာရှိမှု
84 သန်းခရီးသည်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Konya အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်
တင်ဒါအသိပေးချက် - စီမံကိန်းမြေတိုင်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်အတိုင်ပင်ခံ ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ ယ်ယူလိမ့်မည်။
ခရီးသည် ၄၁၉ ဦး ကိုတစ်နာရီအတွင်း Ankara-Istanbul YHT လိုင်းဖြင့်သယ်ဆောင်သွားမည်
Eastern Express လေ့လာရေးခရီးစဉ်ဘယ်တော့စမှာလဲ။
မီးရထားလမ်းကြောင်းမြေပုံ YHT TCDD နှင့်လက်ရှိ Lines 2020
မော်တော်ကားအခကြေးငွေများ Sleeping TCDD